June 19, 2020 - Khitalin Media
ညအိပျ ယာဝငျ ခါနီးတိုငျး ပြားရညျ (၁) စှ နျး သောကျပေးခွငျးဖွငျ့ ရရှိလာမညျကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား
June 19, 2020 Khitalin Media 0
ည ဘက်မှာ အချိုစားခြင်းက မကောင်းပါဘူး။ သကြားအဖြူဆိုပိုဆိုးပါတယ်။ လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ ပျားရည်ကလည်း အချိုမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျားရည်ကတော့ ချွင်းချက်ပါ။ ဆေးအဖြစ် တစ်နေ့တစ်စွန်း မှီဝဲမယ်ဆိုရင် ပျားရည်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ကောင်းကျိုးများစွာပေးနိုင်ပါတယ်။ ပျားရည်ဟာ အချိန်ပေါ်အလိုက်၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းပေါ်အလိုက် အာနိသင်တွေက မတူပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ ညဘက်ပျားရည်သောက်ခြင်းရဲ့ […]
စက္ကန့် ၃၀ နှင့် သင့် နှလုံး ကောင်းမကောင်း အလွယ်တကူစစ်ကြည့်နည်း
စက္ကန့် ၃၀ နှင့် သင့် နှလုံး ကောင်းမကောင်း အလွယ်တကူစစ်ကြည့်နည်း နှလုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အဓိက အကျဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေး ကို အမြဲ ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးနေဖို့ လိုပါတယ် ။ တကယ်လို့ ဆေးခန်း သွားပြီး […]
ဖုန်းနံပါတ်အပြဲလေးကိုင်ပြီး ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုပြီး ဥုးဇင်းဆီမှာခွင့်တောင်းနေတဲ့ကိုရင်လေး
ဒူးနာတဲ့သူတှကေို ကိုယျခွငျးစာလို့တငျပေးလိုကျတာပါ ….
စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ​ ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် …ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ်…. ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော …ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ ခုတော့ပျောက်သွားလို့ ရန်ကုန်မှာချော်လဲလို့ရတဲ့ ဒဏ်ရာနာနေတာကြောင့်ခုပြန်လုပ်ထားပါတယ်…. […]
သူမရဲ့Video ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ချယ်ရီသင်း
အဲ့မှာ သေချာကြည့် ငါ့မှာ ဘာTattoo မှ မရှိဘူး အခုလက်ရှိ ယောကျာ်းလေး Group တွေ လိုက်ဖြန့်နေတဲ့ ချယ်ရီသင်းရဲ့ HD Video ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒဲ့ချွတ်ပြဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ချယ်ရီသင်း ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ငါ့အကြောင်းကိုသေချာစုံစမ်းပြီးတော့မှ နင်တို့လုပ်ခဲ့ရမှာ ငါ့ဘဝမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှမတိုက်ခိုက်ဖူးသလိုဘယ်တုန်းကမှလဲ […]
“ဘုနျးကွီးကို ဘီး ဘယျလိုရောငျးမလဲ” (အရမျးကောငျးလို့ မြှ‌ဝေပါတယျ)
တစ်ခါတုန်းက Company အကြီးကြီးတစ်ခုမှာ Sales (အရောင်းဝန်ထမ်း) ရာထူးအတွက် အလုပ်လျှောက်တဲ့ ဝန်ထမ်း(၃)ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၃ယောက်လုံးဟာ ရာထူး နေရာအတွက် သင့်တော်သူတွေမို့ အင်တာဗျူးမေးတဲ့ သူက ခေါင်းခဲလာပါတယ်။ နောက်တော့ အကြံရပြီး သူတို့သုံးယောက်လုံးကို အလုပ်တစ်ခု စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်းလိုက်တဲ့ အလုပ်ကတော့ တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဆီကို ဘီးသွားရောင်းခိုင်းခြင်းပဲ […]
အိမ်မှာအပင်စိုက်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အပင်နိမိတ် အပင်နိမိတ် ၁။ ကိုယ့်ခြံထဲက အပင်တွေ အလွယ်တကူ မခုတ်ပါနဲ့။ တချို့ အပင်‌တွေက အိမ်သား တစ်ယောက်‌ယောက်နဲ့ ဆက်နွယ် နေတတ်လို့ လူ သွားထိပါတယ်။ ၂။ အိမ်‌ပေါက်တည့်တည့် ဝါးပင် မစိုက်ပါနဲ့။ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၃။ […]
ညီလေးပန်းကုံးက ခုံပြတ်ဆိုဘယ်လောက်လဲ လးသိန်းခွဲလောက်ရှိမယ်အကိုတဲ့
‘ ညီလေးပန်းကုံးက ခုံပြတ်ဆိုဘယ်လောက်လဲ ‘ ‘ လေးသိန်းခွဲလောက်ရှိမယ်အကို ‘ဘေးက ဝိတ်တာလေးက လက်ကလေးနှစ်ဖက်နောကိပစ်ပီး ချက်ချင်းဖြေသည်။ ‘ သူ့ကို ခုံပြတ်ချလိုက်ကွာ ‘ ‘ ခုဆိုနေတဲ့ ကောင်မလေးကိုလား ဆရာ ‘ ကျနော်က ခေါင်းငြိမ့်ပီး ငါးသိန်းတစ်အုပ်ပစ်ပေးလိုက်သည်။ ‘ ပိုတဲ့ ငါးသောင်း […]
ခေါငျးကိုကျ၊ မကျြရိုးကိုကျ၊ ဇကျကွောတကျ ခွငျးကိုသကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့ ဆေးနညျး
ခေါင်းကိုက်၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ ဇက်ကြောတက် ခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း ခေါင်းကိုက်။ နားထင်ကိုက်။ ဇက်ကြောတက် မျက်ရိုးကိုက်။ အလုပ်တစ်ဘက်နှင့် ဆေးခန်းသွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လျှင်ချင်းတက်ကိုပါးပါးလှီးပြီးနထင်နှစ်ဘက်တွင်ကပ်ပေးပါ ။ဇက်။ဂုတ်ကျီးပေါင်းရှိသူများ။ ကျီးပေါင်းရင့်၍မူးသူ။ ဇက် ကိုခဲဆွဲကုသနေရသူများသည် ဇက်ရင်းကျီးပေါင်းဖုပေါ် တွင်ချင်းကိုပါးပါးလှီးပြီး ၄-၅ နေရာကပ်နိုင်ပါသည် ။ချင်းတွင်အပူဓာတ်ရှိသည်။ အရောင်ကျစေသောသတ္တိလည်းရှိသည်။ ပိုးကိုသေစေနိုင်သောသတ္တိလည်းထိုက်သင့်သလောက်ရှိပါသည်။ချင်းသည်အပူဖြစ်သဖြင့် ကပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အာနိသင်ပြပါသည်။ […]